Motorola Milestone | တွင် root access ကိုမည်သို့ရယူရမည်နည်း Androidsis ပါ
Motorola မှတ်တိုင်ပေါ်တွင် root access ကိုဘယ်လိုရယူမလဲ
antocara | | Android Root ပါ, Motorola က, ရွမ်, လဲ tutorial
စောင့်ဆိုင်းမှုကြာမြင့်သော်လည်းဤနေရာတွင်ရောက်နေပြီ၊ ဖြစ်နိုင်ပြီးဖြစ်သည် Motorola Milestone တွင် root access ရယူပါမရ။ ဤခွင့်ပြုချက်ကိုရယူခြင်းအားဖြင့်ငါတို့သည်တရားဝင်မဟုတ်သောသူများအတွက် rom ကိုပြောင်းနိုင်ခွင့်ရှိသည်၊ ၎င်းကို run ရန်ခွင့်ပြုချက်ရှိရန်လိုသောအပလီကေးရှင်းအချို့ကို install လုပ်ပြီးအခြေခံအားဖြင့် terminal ကိုအပြည့်အ ၀ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
ဒီအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုဂျာမန်ဖိုရမ်ကနေယူတာလို့ပြောဖို့ပထမ ဦး ဆုံးအရာ android-hilfe.de။ မှ androidsis ပါ terminal ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောဖြစ်နိုင်သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်မရှိပါ။
အ Motorola Milestone တွင် root access ရရန်အဆင့်များ ၎င်းတို့သည်အလွန်နည်းသည်။ မကြာသေးမီကပုံမှန်အားဖြင့်သင်ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ရန်လိုသည်။
2.- အဲဒါကို update.zip လို့နာမည်ပြောင်းပြီး SD ကဒ်ထဲကိုကူးထည့်ပါ
၄။ ကင်မရာခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ ပါဝါခလုတ်သည်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တြိဂံတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။
၆။ ရွေးချယ်စရာများဆက်တိုက်ပေါ်လာလိမ့်မည်၊ ၎င်းတို့အကြားရွေ့လျားရန်အသံခလုတ်များကိုသုံးပါ
7.- update.zip နှင့်သက်ဆိုင်သောရနိုင်သောရွေးချယ်စရာများကိုရွေးပါ
8.- update ကစလိမ့်မယ်၊ အဆုံးမှာ restart လုပ်ဖို့တောင်းဆိုလိမ့်မယ်။
Cuando termine ya tendrás el Motorola Milestone သည် root access နှင့်ဖြစ်သည်မရ။ ဤ terminal အတွက်ပထမဆုံးပြုပြင်မွမ်းမံထားသော rom များကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီဖြန့်ချိမည်မှာသေချာသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Motorola က » Motorola မှတ်တိုင်ပေါ်တွင် root access ကိုဘယ်လိုရယူမလဲ
ပြီးပါပြီ !!!, Rom ကိုစောင့်ပါ !!!
ငါအဆင့်တွေကိုလိုက်နာပြီး sdcard: update.zip ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့ E: ဖွင့်လို့မရဘူး၊ cache / recovery / command ကိုငါဘယ်သူဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိတဲ့သူရှိလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ပြီးပြည့်စုံတယ်၊ တရားဝင်အခန်းကိုငါဘယ်လိုပြန်ယူနိုင်မလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
၂.၀.၁ မှ ၂.၁ သို့ဤအပ်ဒိတ်နှင့်အပ်ဒိတ်လုပ်ရာတွင်မည်သည့်ဘာသာစကားကျန်သနည်း။
ငါအာဂျင်တီးနားမှာ Personal carrier .. မှတ်တိုင်တစ်ခုရှိတယ်… .tb ငါခြေလှမ်းတွေကိုလိုက်တိုင်းငါ့ကိုတွန်းတယ်“ E: ဖွင့်လို့မရဘူး / cache / recovery / command” ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်“ sdcard: update.zip” ကိုရွေးပါ။ menu နဲ့ငါ့ကိုတွန်းတယ်။
update package ဖွင့်နေသည်။
ဘာကြောင့်လဲ .. အဲဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်လဲ။
အရင်ဆုံးအဲဒါကိုပြန်ညှိပေးပါ ... နာမည်ကိုမမှတ်မိဘူး၊ ဒါကတတိယရွေးချယ်မှုမှန်းငါသိတယ်။
ငါအရမ်းသွက်လက်ရမယ်၊ ကင်မရာနဲ့စက်နှိုးလိုက်တာ၊ ငါ့ဘဝမှာတြိဂံပုံဘယ်တုန်းကမှပေါ်မလာဘူး။
Mariano ကဲ့သို့ငါနှင့်တူသည်၊ ငါ၌အာဂျင်တီးနား "ကိုယ်ပိုင်" မှတ်တိုင်ရှိသည်၊ ခြေလှမ်းအားလုံးကိုငါ လုပ်၍ ငါအမြစ်မဖြတ်နိုင်၊ ဘာကြောင့်လဲသိလား။
ကျွန်ုပ်၏ motorola မှတ်တိုင်တွင် software ကိုမည်သို့တင်ရမည်နည်း
update ကို install လုပ်တဲ့အခါ
အမှားတစ်ခုပေါ်လာလျှင်လုံး ၀ မဖွင့်ပါ
၎င်းသည်အလွန်ထူးဆန်းသည်၊ ၎င်းအားတပ်ဆင်ခြင်းကိုဖျက်ပစ်သည်၊ သင်မလုပ်နိုင်ဟုငါ့ကိုပြောသည်
Emiliano ferrari ဟုသူကပြောသည်
Emiliano Ferrari ကိုပြန်ပြောပါ